AMISOM oo sheegtay in aan loo dhutin doonin Ciidamada Itoobiya hadii ay ka baxaan Bay iyo Bakool – idalenews.com
AMISOM oo sheegtay in aan loo dhutin doonin Ciidamada Itoobiya hadii ay ka baxaan Bay iyo Bakool
Taliyaha guud ee Ciidamada AMISOM ee Soomaaliya Jen. Andrew Gutti ayaa sheegay inay xaqiijin doonaan ammaanka deegaanada la filayo in ay Ciidamada Itoobiya ka bixi doonaan, isagoo cadeeyay in aanay dhici doonin marnaansho xaga ammaanka.
Wareysi uu siiyay Wakaalada Wararka ee AFP ayuu sheegay Jen. Gutti inay la wareegi doonaan goobaha ay ka bixi doonaan Itoobiya oo la hadal haayo in dhowaan faarujin doonaan Bay iyo Bakool.
Jen. Gutti ayaa sheegay inay AMISOM awood u leeyihiin in howl galada ka sii wadaan Gobolada Koofur Galbeed Soomaaliya, hadii Ciidamada Itoobiya sii joogaan ama ay ka tagaan sida uu yiri.
Taliyaha ayaa sheegay in aanay marna ogolaan doonin in dhibaatadii Al-Shabaab ka wadeen deegaanadaas in mar kale dib ugu soo laabto, waxaana uu ku qanciyay shacabka deegaanadaas inay xaqiijin doonaan ammaanka.
Ciidamada AMISOM ayaa ku sugan magaalada Buurhakaba oo u jirta Baydhabo ilaa 60-KM, waana halka la hadal haayo in Itoobiyaanka faarujin doonaan sida saraakiishooda ay u cadeeyeen Xildhibaanadii gaaray Baydhabo.
Axadii la soo dhaafay ayay aheyd markii Ciidamada Itoobiya ka baxeen Xudur, isla markaana dib ugu laabteen Al-Shabaab degmadaas muddo sanad kadib.
Golaha Sare Culumaa’udiinka Ahlusuna oo cambaareeyay qaraxyadii Ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay